‘लकडाउन’मा के–के गर्न पाइन्छ ? यस्ता काम भए घरबाट बाहिर निष्कन पाइने ! | HimalDarpan
सरकारले भोली चैत्र ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशलाई लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरलेको नेतृत्वमा बसेको कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रण उच्च स्तरिय समितिले आगामी दिनसम्म नागरिकलाई घरबाट निष्कन प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
आइतबार फ्रान्सबाट आएको एक युवतीमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण देखिएपछि देशभर सन्त्रास फैलिएको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णयको पहिलो बुँदामा ‘औषधी उपचार, खाध्य वस्तु खरिदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निष्कन नपाइने’ भन्ने उल्लेख छ । औषधी उपचार गर्नका लागि वा खाध्यान्न किन्नका लागि भने घरबाट निष्कन पाइने छ ।
यद्धपी सार्वजनिक सवारी साधन नै नचलेपछि सर्वसाधरणलाई यसले निकै कठिन बनाउने छ । अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक कुनै पनि यात्रु बाहक सवारी साधनमा रोक लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सुरक्षा निकायबाट तोकिएका बायुयान बाहेक सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
यो पनि : अब घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने, नेपाल पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय
तीन महीना बन्दाबन्दीमा रु. ३४ अर्ब ३८ करोड रेमिटेन्स घट्यो
सेयर मूल्य बढ्छ वा घट्छ भनेर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डको चेतावनी